Antsahamanitra: nanolotra ny « lafatra » ny tarika Mage4 | NewsMada
Antsahamanitra: nanolotra ny « lafatra » ny tarika Mage4
Vao ny 22 avrily teo no nanao fampisehoana, tsy hay hadinoina, ny tarika Mage4, teto an-dRenivohitra. Efa-bolana aty aoriana, vao mainka « natsiro » ny fihaonany tamin’ny mpankafy, tetsy Antsahamanitra.
Notontosaina omaly tolakandro, araka ny fotoana efa nampanantenaina, ny seho goavana faharoa an’ny tarika Mage4, teto an-dRenivohitra, tamin’ity taona ity. Tsy mitsaha-miakatra ny fankafizan’ny olona, indrindra ny tanora, ny mozika voizin’izy valo mirahalahy : ny mozika rock.
Afa-po tanteraka ireo tonga nijery ny fampisehoan’ny tarika, efa-bolana lasa izay, saingy mbola « lafatra », araka ny lohatenin-kiran’ny tarika, ny notanterahina omaly tolakandro. Nitondra zava-baovao hatrany ry Mage4, indrindra teo amin’ny fandrindrana an-tsehatra ireo hira.
Anisan’ny nisongadina, ohatra, ny fiakaran’ny orkestra « symphonique » teny an-tsehatra, nanamafy ny feon-javamaneno maranitra, mifanaraka tsara amin’ny rock lalaovin’ny tarika. Raha mitaha ny tamin’ny 20 na 15 taona lasa, mihamavesatra ny mozika entin’ny tarika Mage4. Hita taratra izany amin’ireo hira taloha nohavaozina.
Fa nampiavaka ny fampisehoana, omaly, ihany koa ny fanotronan’ny tarika hafa, efa tazana tamin’ny fampiaraham-peo any anaty rakitsary any. Anisan’izany ny tarika Allkiniah. Ankoatra ireo, fanomezana goavana natolotry ry Ken ny rakikira roa, ahitana ireo hira taloha nohavaozina.
Afa-po ny mpijery iny fampisehoan-dry Mage4 iny, saingy tsy toy izany kosa ny mpanao gazety, indrindra ny mpakasary, izay tsy afaka nanatontosa an-tsakany sy an-davany ny asany. Teny anaty olona mitsangana sy mitsinjaka izy ireo no nasaina naka sary.